Ilaaha Aabbaha ah, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Ilaaha ah Aabbaha, waa qofka ugu horreeya Eebbe, oo aan asal ahaan ahayn, kaas oo Wiilku ka dhashay qarniyadii hore oo kan Ruuxa Quduuska ahu weligiis ku sii socdo Wiilka. Aabaha, oo abuuray wax kasta oo la arki karo oo aan la arki karin oo ku saabsan Wiilka, ayaa soo diraya Wiilka si aan u gaarno badbaadada oo u siiso Ruuxa Quduuska ah cusboonaysiinta iyo aqbalitaanka innagoo ah carruurta Ilaah. (Yooxanaa 1,1.14, 18; Rooma 15,6; Kolosay 1,15-16; Yooxanaa 3,16; 14,26; 15,26; Rooma 8,14-17; Fal 17,28)
Annaga ahaan Masiixiyiin ahaan, rumeysiga aasaasiga ah ayaa ah in Ilaah jiro. "Ilaah" - iyada oo aan maqaal lahayn, oo aan lahayn dheeri dheeraad ah - waxaan ula jeednaa Ilaaha Kitaabka Quduuska ah: ruux wanaagsan oo awood badan leh oo abuuray wax walba, kan noogu dhow, oo u dhow waxa aan qabanno, waxa ku jira iyo nolosheenna ficil iyo na siiyaa daa'in weligiis wanaaggiisa.
Isku soo wada duuboo, Ilaah nin ma fahmi karo. Laakiin waxaan ku bilaabi karnaa: Waxaan soo qaadan karnaa dhismayaasha cilmiga ilaahey ee noo oggolaanaya inaan garowno astaamaha aasaasiga ah ee sawirkiisa oo na siiso fahanka ugu horreeya ee qofka Ilaah yahay iyo wuxuu ku sameeyo nolosheena. Aynu fiiro u yeelo tayada Ilaah, oo rumeeyaha cusub, tusaale ahaan, laga yaabo inuu si gaar ah u caawiyo.
Dad badan - xitaa kuwa rumaystayaasha wakhti dheer - waxay raadsadaan caddeyn jiritaanka Ilaah. Ma jiro wax daliil ah oo Eebbe ka raalli yahay qof walba. Waxay u badan tahay inay kafiican tahay kahadalka caddaynta ama tilmaamaha halkii aad caddayn ka noqon lahayd. Caddayntu waxay ina siineysaa hubaal in Eebbe jiro iyo in dabeecadiisu u dhigantahay waxa Kitaabka Quduuska ahi ka leeyahay isaga. Ilaah “iskama daayo inuu wax sheego,” Bawlos wuxuu ugu dhawaaqay dadka aan Yuhuudda ahayn ee jooga Lustra (Falimaha Rasuullada 14,17). Is-marqaatiga - waa maxay?
abuuridda Sabuurradii 19,1: 1,20 ayaa leh: "Samooyinku waxay caddeeyaan ammaanta Ilaah ..." Rooma waxay leedahay:
Sababtoo ah ilaaha aan la arki karin ee ah, taasi waa xooggiisa daa'imka iyo ilaahnimadiisa, waxaa laga arkay shaqadiisii ​​tan iyo abuuritaanka dunida ... »Abuuritaanka laftiisu wax buu Ilaahay ka sheegayaa.
Leben waxay ku saleysan tahay walxaha kiimikaad ee cakiran ee aadka u adag iyo falcelinta. Qaarkood waxay u tixgeliyaan nolosha inay tahay "caqli-gal sababay"; qaar kalena waxay u arkaan inay ku soo beegmeen. Qaar waxay aamminsan yihiin in saynisku maalin uun caddeyn doono asalka nolosha "Ilaah la'aan". Dad badan, si kastaba ha noqotee, jiritaanka nolosha ayaa tilmaan u ah ilaah abuura.
Nin leeyahay is-milicsiga. Wuxuu baadhaa adduunka, wuxuu ka fakaraa macnaha nolosha, guud ahaanba waa awoodaa inuu raadsado macnaha. Gaajo jireed ayaa muujineysa jiritaanka cunno; Thirst wuxuu soo jeedinayaa inay jiraan wax hakin kara harraadkan. Rabitaankeenna ruuxiga ah ee macnaha miyuu muujinayaa in macnaha dhabta ahi jiro oo la heli karo? Dad badani waxay sheegtaan inay macno ka heleen xiriirka Eebbe.
Akhlaaqda Sax iyo khalad ma yahay arin fikradeed ama su'aal ah aragtida aqlabiyadda, mise waxaa jira amar ka sarreeya aadanaha oo tixgeliya wanaagga iyo xumaanta? Haddii uusan jirin Ilaah, markaa bani’aadamku aasaas uma laha inuu ugu yeero wax shar ah, ma jiro sabab lagu cambaareeyo cunsuriyadda, xasuuq, jirdil iyo xasuuq la mid ah. Jiritaanka shar waa sidaas darteed waxay daliil u tahay inuu jiro Ilaah. Haddii aysan jirin, xoog saafi ah waa inuu xukumaa. Sababaha sababihi waxay u hadlayaan rumaynta Ilaah.
2 Timoteyos 1,9 wuxuu ka hadlayaa wixii Ilaah "hortiis sameeyey". Waqtigu wuu bilaabmay, oo Ilaah hortiis buu jiray. Waxay leedahay jiritaan aan wakhti lahayn oo aan lagu qiyaasi karin sanado. Waa weligiis, da 'aan xad lahayn - iyo xaddidnaan la'aan iyo dhowr bilyan oo aan weli waarayn. Xisaabteenu waxay gaaraan xadkooda haddii ay rabaan inay sharxaan jiritaanka Ilaah.
Tan iyo markii Eebbe abuuray arrinta, wuxuu jiray ka hor sheygan mana aha sheyga laftiisa. Waa ruux - laakiin ma "ka samaysan" ruuxa. Eebbe laguma abuuro haba yaraatee; way fududahay oo waxay u jirtaa ruux ahaan. Wuxuu qeexayaa ahaanshaha, wuxuu qeexaa ruuxa wuuna qeexaa arrinta.
Jiritaanka Eebbe wuu ka sarreeyaa arrinta isla markaana cabirrada iyo sifooyinka arrintu isaga isaga isaga ma khuseeyaan. Laguma cabbiri karo mayl iyo kiiloomitir. Sulaymaan wuxuu qiray in xitaa samooyinka ugu sarreeya aysan Ilaah rumaysan karin (1 Boqorradii 8,27). Wuxuu buuxiyaa samada iyo dhulka (Yeremyaah 23,24); waa meelwalba, waa meelwalba. Meel kufiican oo kaamil ah oo aysan jirin majirto.
Ilaa intee ayuu Ilaah awood badan yahay? Haddii uu kicin karo cir weyn, naqshadeeya nidaamyada qoraxda ee abuuri kara koodhadhka DNA, haddii uu "karti" u leeyahay dhammaan heerarkan awoodda, markaa rabshadiisu waa inay runtii noqotaa mid aan xad lahayn, markaa waa inuu yahay qof awood u leh. Luukos 1,37 ayaa yidhi: "maxaa yeelay wax aan Ilaah run ahayn ma jiraan." Ilaah wuu samayn karaa wax kasta oo uu doonayo.
Hal-abuurka Eebbe wuxuu ku muujiyaa caqli ka sarreeya caqligeenna. Isaga ayaa maamuli kara adduunka oo xaqiijinaya jiritaankiisa sii socda daqiiqad kasta (Cibraaniyada 1,3). Taasi micnaheedu waa inuu ogaadaa waxa ka dhacaya adduunka oo dhan; caqligiisu waa mid aan xad lahayn - waa nin wax walba wax og. Wax kasta oo uu doonayo inuu garto, garto, waaya-aragnimo, wuu gartaa, wuu gartaa, wuu la kulmaa.
Maadaama Eebbe qeexayo waxa saxda ah iyo waxa khaldan, isagu xaq buu leeyahay oo wuxuu leeyahay awood uu had iyo jeer ku saxaro. «Maxaa yeelay, Ilaah looma tijaabin karo inuu shar sameeyo» (Yacquub 1,13). Waxay ku jirtaa natiijada ugu sareysa oo gebi ahaanba waa caddaalad (Sabuurradii 11,7). Heerarkiisu waa sax, go'aannadiisu way sax yihiin, oo isagu adduunka ayuu ugu xukumaa si caddaalad ah maxaa yeelay asal ahaan isagu waa wanaagsan yahay oo waa xaq.
Qof xer ah ayaa Ciise weydiiyay: "Sayidow, Aabbaha na tus ..." (Yooxanaa 14,8). Wuxuu doonayay inuu ogaado waxa Ilaah yahay. Wuxuu ogaa sheekooyinka duurka gubanaya, tiirkii dabka iyo daruurkii Siinay, carshigiisii ​​aan cabsi lahayn ee uu Ezekiel arkay, iyo warkii uu Eliiyaah maqlay (Baxniintii 2: 3,4; 13,21:1; 19,12 Boqorada 1; Yexesqeel). Ilaah wuu ka dhex muuqan karaa waxyaalahaas oo dhan, laakiin isagu muxuu runtii isagu yahay? Sideen u qiyaasi karnaa isaga?
Ciise wuxuu yidhi, Kii i arkaana, wuxuu arkaa Aabbaha (Yooxanaa 14,9). Haddii aan rabno inaan ogaano sida Ilaah yahay, waa inaan eegnaa Ciise. Waxaan ku baran karnaa aqoonta Eebbe dabiicadda; aqoon dheeraad ah oo Ilaah ka ah sida ay u muujiso lafteeda Axdiga Hore; inta badan aqoonta Ilaah, si kastaba ha noqotee, sida uu isagu isu muujiyay Ciise.
Ciise wuxuu ina tusayaa dhinacyada ugu muhiimsan dabeecadda Eebbe. Isagu waa Iimaan, taasoo macnaheedu yahay "Ilaah inala jiro" (Matayos 1,23). Wuxuu ku noolaa dembi la'aan, oo aan ikhtiyaar lahayn. Naxdin baa ku dhacday isaga. Wuxuu dareemaa jacayl iyo farxad, rajo xumo iyo xanaaq. Wuxuu daneeyaa shaqsiga. Isagu xaqnimo buu weyddiistaa, dembigana wuu cafiyaa. Wuxuu u adeegay kuwa kale, ooy kujiraan silica iyo dhimashada.
Ilaaha ka sarreeya abuurista sidoo kale wuxuu xor u yahay inuu ku dhex shaqeeyo abuuritaanka. Tani waa imaatinkiisii, inuu nala joogo. In kasta oo uu ka weyn yahay caalamka oo uu joogo meelkastoo dunida ka jirta, wuu inala jiraa “si aan ula jirno” gaalada. Ilaaha xoogga badan had iyo goor waa inoo dhow yahay. Way dhawdahay oo waa isku waqti (Yeremyaah 23,23).
Ciise wuxuu galay taariikhda aadanaha, booska iyo waqtiga. Isagu waa bini-aadam, wuxuu na tusay nolosha jidhku ku habboon yahay inay ahaato, wuxuuna ina tusiyaa in Ilaah doonayo inuu kor u qaado nolosheena jidhka. Nolosha daa'imka ah ayaa nala siiyaa, nolosha ka baxsan xadka jirka ee aan hadda ognahay. Nolosha ruuxa ayaa naloogu deeqayaa: Ruuxa Ilaah ayaa inagu soo gala, oo inagu dhex jira oo inaga dhigaa carruurta Ilaah (Rooma 8,11:1; 3,2 Yooxanaa). Ilaahay had iyo jeer wuu inala jiraa, isagoo ka shaqeynaya meel bannaan iyo waqti inuu na caawiyo.
Ilaah qorshayaashiisa ayuu inagu leeyahay maxaa yeelay isagu wuxuu inaga abuuray araggiisa (Bilowgii 1:1,27). Wuxuu inaga codsanayaa inaan is waafajinno isaga - naxariis, ma aha awood. Ciise Masiix wuxuu ina siinayaa tusaale aan ku dayno oo aan ku dayan karno: tusaale is-hoosaysiinta, adeeg-la’aan, jacayl iyo naxariis, iimaan iyo rajo.
"Ilaah waa jacayl," ayuu qoray Johannes (1 Yooxanaa 4,8). Wuxuu ina tusay jacaylkiisa uu inoo qabo isaga oo u diraya ciise inuu u dhinto dembiyadeenna, si caqabadaha innaga dhexeeya iyo ilaahay u dhacaan oo ugu dambaynti aynu ula noolaan karno farxad weligeed ah. Jacaylka Eebbe ma aha fikir rajo - waa camal inaga caawisa baahiyaheena qotada dheer.
Jacaylka Ilaah noo qabo, oo sida ugu cad loogu muujiyey Ciise Masiix, waa tusaalahayaga: «kan waa jacaylku: ma aha inaannu Ilaah jeclayn, laakiin isagaa ina jeclaaday oo wiilkiisii ​​ayuu u soo diray inuu heshiisiyo dembiyadeenna. Gacaliyayaalow, haddii Ilaah sidaa inoo jeclaaday, waa inaynu isjeclaanno (1 Yooxanaa 4: 10-11). Haddaanu ku nool nahay jacayl, nolosha weligeed ah waxay noqon doontaa farxad, annaga oo keliya uma aha laakiin sidoo kale kuwa nagu wareegsan.
Haddaan Ciise ku raacno nolosha, annaguna waannu ku raaci doonnaa dhimashada iyo ka dib sarakicidda. Isla Ilaaha ah kii Ciise kuwii dhintay ka soo sara kiciyey isagaa na soo sara kici doona oo na siin doona nolosha weligeed ah (Rooma 8,11). Laakiin hadaan baran barashada jeclaanta, ku raaxeysan mayno nolosha weligeed ah. Taasina waa sababta uu Eebbe ina baray jacaylka, xawaaraha aan ku sii wadi karno, iyada oo loo marayo tusaale wanaagsan oo isagu horteenna ku jira, oo qalbiyadeenna uga beddelaya Ruuxa Quduuska ah ee ka shaqeeya. Awoodda xakameysa quwadaha nukliyeerka ee qorraxda waxay si kalgacal leh ugu shaqeeyaan qalbiyadeenna, weyna noogu jirtaa, waxay ku guuleysataa jacaylkeena, waxay ku guuleysataa daacadnimadeena.
Ilaah wuxuu ina siinayaa macnaha nolosha, hanuuninta nolosha, rajo nolosha weligeed ah. Waan ku kalsoonaan karnaa, xitaa haddii aan u xanuunsanno wanaag wanaag. Awoodiisa ayaa ka dambeysa wanaagga Eebbe; Jacaylkiisuna wuxuu ku hanuuniyaa xigmaddiisa. Awoodaha adduunka oo dhami waxay ku jiraan amarkiisa wuuna u adeegaa sida ugu wanaagsan. Laakiin waxaan ognahay in kuwa Ilaah jecel, wax waliba inay u adeegaan sida ugu wanaagsan ... » (Rooma 8,28).
Waxaan ugu jawaabnaa naxariistiisa mahadnaq; naxariistiisa aaminnimo; wanaaggiisa iyo jacaylkeenna. Waan ku ixtiraamnay, waan is caabudnay, waan is dhiibnay annagoo rajeyneynayna inaan wax badan bixinno. Maaddaama uu noo muujiyay jacaylkiisa, waxaan u oggolaannay inuu na beddelo si aan u jeclaano dadka hareeraha inaga ah. Waxaan u adeegsanaa wax kasta oo aan haysano, wax kasta oo aan nahay, wax walba oo uu ina siinayo si aan ugu adeegno kuwa kale anagoo raacnay tusaalaha Ciise.